Wonke umuntu owenza ukuthunga, inamba enkulu yezingaliti ezahlukene. Kunzima kakhulu ukugcina ngokuhlelekile. Phela, bahlale bewela phansi futhi balahlekile. Ukuze usebenze ngezinaliti kuye kwaba lula kakhulu, udinga ukwenza indawo ekhethekile. Ibha yezinaliti ikuvumela ukuba uhlobise ikhoneni lakho lokuthunga, ulahle ama-rags futhi ungesabi ukulahlekelwa izinaliti eziningi.
Le divayisi ingaba nezinhlobo eziningana. I-needle, eyenziwe ngesandla, ingaxhunyaniswa nomshini wokuthunga, esandleni, ukulenga odongeni noma ukuhlobisa itafula. Ukuze kuthungwe izinaliti ezahlukene, ngakho-ke amaphuzu ahlukanisiwe kufanele athungwe ukuze agcinwe futhi asebenze kalula.
Ibhedi lezinaliti elilula ngezandla zalo ngendlela yemilenze. Ukuyikhiqiza, udinga izingcezu ezimbili zendwangu, i-sintepon kanye ne-tape yokuhlobisa ukuze uqedele. Indwangu ingaba yimuphi. Into eyinhloko ukuthi ihlatshwa kalula ngenaliti. Kusukela ku-flaps, sinqamula izingcezu ezimbili ezigciniwe zesayizi efanayo. Bafake ubuso obheke ngaphakathi bese ugobe emaphethelweni, ushiye indawo encane evulekile.
Siphendulela ikhava ngakwesokunxele futhi siwugcwalise nge-sintepon. Sula umgodi ngesaliti yesandla. Emkhakheni wezingcingo esimisa ubhontshisi wokuhlobisa, lungisa ngezinaliti bese uthunga. Uma ufuna ukukwazi ukuyibeka eludongeni, gcoba i-eye kusuka ku-braid.
Kancane kancane kuncike embhedeni wendiza ngezandla zabo ngendlela yelanga. Udinga i-flap ye-cloth ephuzi noma e-orange kanye nezinsalela zamateyipu anemibala eminingi yobubanzi obufanayo. Ngesizinda sasihlukanisa imininingwane emibili ejikelezayo. Izinsalela ze-tape zidutshulwe zibe izingcezu eziyisentimitha eziyisishiyagalombili bese ugoqa ingxenye ngayinye ngesigamu, uhlangothi olungaphambili. Sithatha ingxenye eyodwa yesisekelo bese sisebenzisa imisebe elungiselelwe kuyo, ngokulinganayo sisakaza kuwo wonke ububanzi futhi silungiselela ngezinaliti.
Sifake ingxenye yesibili yesisekelo ngobuso phansi. Sula emaphethelweni, ushiye indawo eyodwa ingavulwa. Siphenduka ilanga lethu, siliname nge-sintepon bese silula ngesandla. Uma izingxenye eziyinhloko, usebenzise indwangu ebushelelezi, khona-ke ungakwazi ukudweba ubuso nomakaki. Futhi uma isisekelo sakho singenangqondo, bese usifaka nge-thread. Ungalenga ilanga kwenye yemibala.
Ukuqala ukuthunga kusuka kumamodeli alula, isikhathi ngasinye siyancipha umsebenzi wakho. Ake sibheke indlela yokwenza umbhede wezinaliti ngesimo senqobe. Sidinga ucezu lwekhadibhodi elimnyama, i-sintepon, i-cloth flaps, noma yikuphi ukusika okufana nama-ribbons ama-lace, izimpaphe noma ubuhlalu. Kusukela kwikhadibhodi sasihlukanisa imibuthano emibili yeminitha ehlukene. I-Big - iyoba yimikhakha ye-hat, encane - isisekelo sephezulu.
Sibeka isiyingi esikhulu ku-flap bese sikala ucezu lwendwangu yalesi sikwele ukuze kuthi lapho ukuqoqa kugcwalise ngokuphelele amakhadibhodi. Sika isiyingi sendwangu. Yenza ngokucophelela ngokuyikho emaphethelweni. Sifaka ingxenye yekhadibhodi ngaphakathi bese siqinisa intambo, ukuqoqa isendwangu kuya esikhungweni. Silungisa intambo ngezingqinamba ezimbalwa. Ingaphansi ibhonethi yethu ilungile.
Manje thatha ingxenye encane yamakhadibhodi, uyibeke emgqeni bese ulinganisa inani elidingekayo lempahla. Kufanele kube ngu-3-4 cm mkhulu kunekhadibhodi. Sithunga indwangu emaphethelweni, faka i-sintepon phakathi, phezulu - umbuthano wekhadibhodi bese uqinisa intambo. Siyilungisa ngezingqinamba ezimbalwa. Lokhu kuzoba ngaphezulu kwekhanda lethu.
Sifaka emasimini e-hat. Sifake ingxenye ephezulu, sivala umkhawulo wezingxenye eziphansi. Sula izingxenye ngesandla. Ngosizo lwekhanda lokuhlobisa noma i-tape, sivala indawo yokujoyina izingxenye. Ungakwazi ukunamathisela i-feather ekhanyayo noma ukuthunga indawo yokuxhuma ngobuhlalu obuhle obuhle. Inhlanhla yethu enkulu-inaliti isilungile.
Ukukhiqiza imibhede kuyisenzo esithakazelisayo kakhulu. Ukuhlwanyela kanye nesimangaliso esinjalo ngezandla zakho, uzodinga ukuzama ukwenza enye imodeli, bese usesithathu. Isilwane ngesigqoko, imbali, i-cactus, i-hedgehog noma isihlalo esihle sizoba yisikhumbuzo esihle kakhulu sabangane nomndeni ngamaholide ahlukahlukene.
Hai Au Ihhotela 3 * (Trang): izithombe kanye nokubuyekeza